सुनको मुल्य आज फेरी बढ्यो, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ? « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौँ- नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ ।आज ‍पनि छापावाला सुन प्रतितोला ८७ हजार २०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै तेजाबी सुन आज ८६ हजार ७५० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।यो मूल्य बुधबारको तुलनामा ३०० रूपैयाँले बढेको हो ।चाँदीको मूल्य आज तोलामा २० रूपैयाँले बढेको छ । चाँदी आज प्रतितोला १२९० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौ । महानायक राजेश हमाल पैत्रिक सम्पत्तीका कारण पनि सम्पन्नशाली छन् । सम्पन्नशाली परिवारमा जन्मिएका हमाललाई उनका बुवाले डाक्टर बनाउन चाहन्थे । तर उनी बुवाको इच्छा विपरित कलाकार बने । त्यसैले उनको बुवासंग त्यती राम्रो सम्बन्ध पनि भएन । अन्तिम अवस्थामा पनि बुवालाई राम्रो सेवा गर्न नपाएकोमा हमाललाई अहिले पनि पछुतो छ । महानायकले गरेको एउटा योगदानका कारण अहिले ४ वटा विपन्न परिवार करोडपति बनेका छन्
नेपाली कांग्रेसमा सकृय हमालका भाई राकेश हमालको केही समय अघि निधन भयो । उनी निधन हुनु अघि यो जमिनमा जाने गर्थे । जग्गा दान दिएकाहरुलाई पनि भेट्ने गरेका थिए । दुई वर्ष अघि मात्र हमाल परिवारले दान दिएका हुन् । खबर पत्रीका बाट
मनोज गजुरेलको बिहेको खबरले मिनाको मन पोलेकै हो त ? किन लेख्छीन् यस्ता स्टाटस